မီးစွဲနေတဲ့ စာခြောက်ရုပ် (ဇေယျာလင်း) | လမ်းအိုလေး
May 23, 2015 by lanolay	Leaveacomment
အနီးကပ်ကြည့်တော့မှ မြင်ရတာဟာ တစ်ယောက်ယောက် အပေါက်
အပြဲဖာနေတာ လူ့နှလုံးအင်္ဂါ တစ်ခုပါလား။ နောက်တစ်ယောက်က
တောင်ပံတွေကို အန်ချနေတယ်။ သောက်ကျိုးနည်းကွာ၊ ဒီလိုအခြေ
အနေမျိုးမှာတောင်မှ အသက်ရှင်နေရတာကို ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တာပဲ။
မနက်ခင်းမှာ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ် ခြေချလိုက်တဲ့အခါ၊ ညက ဘာအိပ်မက်
ဆိုးပဲ မက်ခဲ့မက်ခဲ့၊ ခံစားရတာဟာ အံ့ဖွယ်သရဲ မဟုတ်ရင်
ယုံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိတဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားခြင်းပဲ — ကြမ်းခင်းတွေရဲ့
မာကျောမှု၊ ခြေထောက်တွေထဲ စီးဝင်လာတဲ့ ဟန်ချက်ညီတည်ငြိမ်မှု။
ကလေးတုန်းက ဆော့ကစားရင်း ဒဏ်ရာရကြရင် သဲနဲ့ပွတ်လိုက်ဖို့
ဘယ်က စတင်သိခဲ့ကြတာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲသလိုမျိုးကို
ပင်ဆစ်လ်ဗေးနီးယားမှာပဲ လုပ်တတ်ကြသလား။ ကဗျာတွေကို
ရှူရှိုက်နဲ့လုပ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဆူပွက်လာဖို့
ချော့တစ်လှည့် ခြောက်တစ်လှည့်နဲ့၊ တပွက်ပွက်လည်းဆူရော
ဒါဟာ ကိုယ့်နှလုံးသား ဝိညာဉ်ပေါ့၊ အခုတော့ လွတ်လပ်သွားခဲ့ပြီ။
Scarecrow on Fire by Dean Young
Scarecrow on Fire (Dean Young)
Everything is brushed away, off the sleeve,
off the overcoat, huge ensembles of assertions
just jars of buttons spilled, recurring
nightmare of straw on fire, you the scarecrow,
the scare, the crow, totems gone, rubies
flawed, flamingo in hyena’s jaws, noble
and lascivious mouth of the gods hovering
then gone, gone the glances, gone moths,
cities of crystal become cities of mud,
centurion and emperor dust, the flower girl,
some of it rises, proof? some of it explodes,
vein in the brain, seed pod poof, maybe
something will grow, another predicament
of bittersweet, dreamfluff milkweed,
declarations of aerosols, vows just sprays
of spit fast evaporate, all of it pulverized
as it hits the seawall, all of it falling snow
on water, flash of flying fish, breach and blow
and sinking, far below creatures of luminous jelly
constellated and darting and baiting each other
like last thoughts before sleep, last neural
sparks coalescing asaface in the dark,
who was she? never enough time to know.
– From Fall Higher by Dean Young
(ဒီးန်ယန်းဂ် – ဘာသာပြန် ဇေယျာလင်း။ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၄ – နှစ်ကာလများ။)
Faces #1 (Khin Mg Yin)